QA kunye noPhononongo
Ukukhwela kunye nempilo
Guqula ifom yokukhangela
Umbuzo: Ngaba uza kuCwangcisa i-B Mess Up Your Cycle
ezaposwa ngomhla Oktobha 29, 2021 By danna
I-Levonorgestrel ifumaneka kwiipilisi zokulawula ukuzalwa, kodwa iSicwangciso B siqulethe umthamo ophezulu onokutshintsha amanqanaba e-hormone yendalo yomzimba wakho. Iihomoni ezongezelelweyo zinokuchaphazela imeko
Umbuzo: Ingaba ukubaleka kundinceda ukukhwela ibhayisekile yam
Ukonyuka kwe-Cardiovascular, Amandla e-Muscular and Exercise Tolerance. Ukongeza kuxinaniso olukhulu lwamathambo, ukubaleka njengomsebenzi woqeqesho olunqamlezayo kunokubonelela ngamava e-aerobic ahluke ngokupheleleyo kumqhubi webhayisikile, okhokelayo.
NdizakuHlala ubusuku bonke ndiseta kwakhona umjikelo wam wokulala
Hayi, ukuhlala uphaphile ubusuku bonke okanye ukulala ngeempelaveki akuyi kululungisa ucwangciso lwakho lokulala. Enyanisweni, ukwenza ezi zinto kunokuphosa ishedyuli yakho yokulala ngakumbi.
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba kuya kubakho umjikelo wama-25 we-Antm
I-Cycle 25 of America's Next Top Model ngumjikelo ozayo owawucingelwa ukuba uza kuqala kwi-VH1 ngelinye ixesha ngo-2019. Ukusukela ngo-2020, akukho zibhengezo zisemthethweni zenziwe.House
Umbuzo: Ingaba Kuyakubakho Incwadi Yesihlanu KuMjikelo Welifa
Emva kweminyaka ephantse ibe sixhenxe, uChristopher Paolini uya kube ekhupha incwadi yakhe yesihlanu kungcelele oluthi Umjikelo weLifa onesihloko esithi, Ifolokhwe, iGqwirha, kunye neNtshulube. Inoveli yefantasy leyo
Umbuzo: Kutheni ubude bomjikelo wam bohluka Nyanga nganye
Njengoko umjikelo uqhubela phambili, enye ihomoni idla ngokubangela elandelayo, ize ke ibangele elandelayo, iqhube umjikelo ngezigaba zayo ezahlukeneyo. Ukuba ngaphezulu okanye ngaphantsi kweehomoni ezithile
Impendulo eKhawulezayo: Kutheni iMpompo yam iMpompo emfutshane yokuHamba ibhayisekile
Ukuba imibhobho yonikezelo lwamanzi ivalekile, impompo iya kumjikelo omfutshane. I-clog kunikezelo lwamanzi idala uxinzelelo lwamanzi oluphezulu ngokukhawuleza. Eyona ndlela yokukhangela
Kutheni uMjikelo weNitrojeni ubalulekile kwi-Ecosystem
INitrojeni Sisitshixo soBomi! Ngaphandle kwee-amino acids, izityalo azinakwenza iiproteni ezikhethekileyo ezidingwa ziiseli zesityalo ukuze zikhule. Ngaphandle kwenitrogen eyaneleyo, ukukhula kwezityalo kuchaphazeleka kakubi. Nge
Umbuzo: Kutheni Usebenzisa Imitha yaMandla ukuHamba ibhayisekile
Iimitha zamandla zikuvumela ukuba ubone kwaye urekhode ngokuthe ngqo ukuba angakanani amandla owachithayo kwibhayisekile, njengoko amandla akho elinganiswa ngeewatts ngexesha lokwenyani- kunye namandla
Umbuzo: Ngaba ukuQhuba ibhayisekile kunokunceda ekulahlekeni kwaMafutha eBelly
Ewe, ukuhamba ngebhayisikile kunokunceda ukulahlekelwa ngamafutha esiswini, kodwa kuya kuthatha ixesha. Uphononongo lwakutsha nje lubonise ukukhwela ibhayisekile rhoqo kunokunyusa ukulahleka kwamafutha kunye nokukhuthaza ubunzima obunempilo. Ukunciphisa
1 2 ... 26,103 Okulandelayo
Ngaba iFlounder Intlanzi yamanzi abandayo
Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi yeBetta
Umbuzo: Kufuneka Ukufudumala Kangakanani Amanzi Eentlanzi zeBetta
Umbuzo: Uwafudumeza njani Amanzi kwiTanki yeentlanzi
Umbuzo: Uzinyibilikisa Njani Intlanzi Ekhenkcezisiweyo Emanzini
Impendulo eKhawulezayo: Ungawayekisa njani amanzi ukuba aphuphuke kwiTanki yeentlanzi
Umbuzo: Uzibona njani iintlanzi emanzini
Impendulo eKhawulezayo: Uyikhupha Njani iChloramine Emanzini Ngeentlanzi
Impendulo ekhawulezayo: Indlela yokufaka ioksijini emanzini kwiintlanzi ngaphandle kwempompo
Bikehike.org Inxaxheba kwiNkqubo ye-Amazon LLC Associates